नर्वेजियनहरू जूवा खेल्न र क्यासिनो खेलहरू खेल्न मन पराउँछन्। तर द्रुत गतिमा चलिरहेको कानुनी स्थितिले खेलाडीहरूलाई ओस्लो, रोजेनबर्ग वा आर्कटिक सर्कलमा तिनीहरूको फिक्स प्राप्त गर्न सँधै सम्भव बनाएको छैन।
राम्रो अनलाइन क्यासिनोको लागि, नर्वेमा आधारित ग्राहकहरूले राज्य-द्वारा संचालित वेबसाइटहरू र लटरीहरूतिर लाग्नुपर्‍यो। नर्वेको पोकर खेलाडीहरूले यसै बीच आफ्नै राष्ट्रिय च्याम्पियनशिप खेल्न विदेश गए।
Is नर्वे एक पूर्ण नो गो क्षेत्र जब यो जुवा आउँछ? पर्याप्त छैन, र त्यहाँ वास्तविक अवसरहरू को लागी अफलाईन र अनलाइन जुवा खेल्ने अवसरहरू छन्। नर्वेली गेमिंग कट्टरपन्थीहरूको लागि विकल्पहरू अन्वेषण गरौं।
यो ध्यान दिनुहोस् कि सबै विदेशी क्यासिनो साइटहरू नर्वेलीयन प्लेयरहरूको लागि उपलब्ध छैनन्। यद्यपि त्यहाँ अझै धेरै अफशोर साइटहरू छन् जसले नर्वेजियनहरूलाई स्वीकार्छन् र नर्वेलीय क्रोनर (kr) मा सञ्चय अनुमति दिन्छ।
शीर्ष १० नर्वे अनलाइन क्यासिनो साइटहरू एक नयाँ बोनसको साथ!
शीर्ष १० नर्वे अनलाइन क्यासिनो साइटहरू एक विशाल बोनसको साथ!
नर्वेली पन्टरहरू ती हुन् जो अनलाइन क्यासिनोमा खेल्न उत्सुक छन्। त्यसोभए तपाईं अनलाइन क्यासिनो साइटहरूको खोजीमा हुनुपर्दछ जहाँ तपाईं आकर्षक प्रस्तावहरू पाउनुहुनेछ र प्रमोशनहरू र अन्य अवसरहरू द्वारा मोहित हुनेछन र आफैंमा रमाईलो लिन र सबै भन्दा आकर्षक अनुभव प्राप्त गर्न। नर्वेजियनहरूका लागि अनलाइन पोकरमा त्यस्तो सफलताको साथ, तपाईं पक्कै अनलाइन पोकर साइटहरूको लागि खोज्नुहुनेछ, साथै नयाँ र नयाँ स्लटहरू। नर्वेमा आधारित खेलाडीहरूको लागि विशेष क्याटरि online गर्दै अनलाइन क्यासिनोहरूको खोजी गर्दा तपाईंले अवश्य भेट्टाउनुहुने प्रस्तावहरूले आकर्षित हुनुहुनेछ। किनभने त्यहाँ ती सबै लोभ्याउने साइटहरू बीच अवैध क्यासिनोहरू छन्, बोनस.एक्सप्रेस तपाईंको लागि छ, शीर्ष, सुरक्षित, र नर्वेजियनहरूको लागि परीक्षण गरिएको अनलाइन क्यासिनोको चयनको साथ। तपाईं निश्चित हुन सक्नुहुनेछ कि हामीले तपाईंको लागि छनौटमा लाइसेन्स प्राप्त अनलाइन गेमिंग साइटहरू सुविधाहरू छन् जुन निष्पक्ष र सम्मानित छन्। हाम्रो छनोट लामो दैनिक काम र अनुभवमा आधारित छ, जब हामी नर्वेजियनहरूका लागि अनलाइन क्यासिनोहरू खोज्छौं र राम्रा प्रस्तावहरू खोज्नको लागि जाँच गर्दछौं।
नर्वे मा जूवा मा वर्तमान स्थिति
जम्मा रूपमा, तिनीहरू जो भूमि आधारित नर्वेजियन क्यासिनोमा क्यासिनो नर्वे खेलहरू खेल्न मन पराउँछन्, उनीहरूसँग तीन विकल्प छन् - तिनीहरू राज्य संचालित घोडा दौड सुविधामा जान सक्छन्, तिनीहरू खुला समुद्रमा क्रूज जहाजहरूमा जुवा खेल्न सक्छन्, वा तिनीहरू छिमेकीमा यात्रा गर्न सक्छन्। राज्यहरु जस्तै डेनमार्क or स्वीडेन, जहाँ क्यासिनो कानूनी छन् र प्रत्येक आगन्तुकले आनन्द लिन सक्दछन्।
नर्वेमा अनलाइन क्यासिनोमा खेल रुचाउनेहरू त्यसो गर्न सक्दैनन्, त्यसैले तिनीहरू सामान्यतया विदेशी वेबसाइटहरूमा भ्रमण गर्छन् जसले नर्वेबाट खेलाडीहरू स्वीकार्छन्। सरकारले ती वेबसाईटहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउँदैन र नर्वेलीयाली जुवा खेलाडीहरूको पहुँचमा प्रतिबन्ध लगाउँदैन। केवल मुख्य मुद्दा भनेको खेलाडीहरूले आफ्ना जितलाई आय र करहरू तिर्ने घोषणा गर्नु पर्छ। नर्वेमा मोबाइल क्यासिनो पनि उपलब्ध छैनन्, जबसम्म यी विदेशी छैनन्, त्यसो भए अनलाइन क्यासिनो नर्वेलाई वास्तविक पैसाको लागि नहेर्नुहोस्।
नर्वेलीयन खेलाडीहरूका लागि कानून
त्यहाँ तीन मुख्य कानूनी ऐनहरू छन् जुन नर्वेमा जुवाको सम्पूर्ण कोठा नियन्त्रित गर्दछ। २० औं शताब्दीको सुरूमा, १ 20 २ in मा, पहिलो थियो १ 1927 1992 २ मा टोटलाइजेटर ऐन - गेमि Act एक्ट, र १ 1995 XNUMX - - लटरी ऐन। यी तीन कानून कानून, पहिलो, जुवा को आला मा राज्य को पूर्ण एकाधिकार स्थापना, दोस्रो, के खेल को अनुमति छ र के छैन को नियमित, र तेस्रो, ती कानूनहरु मा अनलाइन जुवा नियमन गरिएको हुनुपर्दछ। यद्यपि सरकारले निर्णय गर्यो कि जटिल नियम तथा कानूनको विकास गर्नु भन्दा नर्वेका सबै क्यासिनोहरूलाई एकै पटक अनलाइन प्रतिबन्ध लगाउन सजिलो हुनेछ।
मुख्य कुरा के हो भने नागरिकहरूले क्यासिनो अनलाइन नर्वे खेलहरूमा धेरै पैसा खर्च गर्ने झुकाव राख्थे, यसबाहेक, राज्य अधिकारीहरूले जूवा खेल्ने तरिका पनि धेरै लत लाग्ने निर्णय गरे। तपाइँलाई परिस्थिति अझ पूर्ण रूपमा बुझ्नको लागि, हामी याद गर्नेछौं कि राज्य संचालित एजेन्सी, नोर्स्क टिपिंग, संस्कृति र चर्च मामिला मन्त्रालय द्वारा नियन्त्रित छ। त्यसैले जुवा खेल्ने आर्थिक गतिविधिलाई देशमा पैसा ल्याउनको रूपमा हेरिंदैन, बरु यसलाई मनोरञ्जनको एक प्रकारको रूपमा लिइन्छ जुन सुपरिवेक्षण गरिनु पर्छ।
नोर्स्क टिपिंग एजेन्सीलाई खेल सट्टेबाजी, लटरीहरू, र अन्य थुप्रै खेलहरू स्थानीयहरूलाई प्रदान गर्न अनुमति छ। नोर्स्क रिक्स्टोटो अधिकतर पशु रेसिंगको लागि जिम्मेवार छ। भर्चुअल उद्यमको रूपमा, २०१० मा, अधिकारीहरूले कानून पारित गरे जसले स्थानीय खेलाडीहरूलाई अझ बढी प्रतिबन्धित गर्‍यो। यस कानूनको अनुसार कुनै पनि बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाई नर्वे अनलाइन क्यासिनोमा जम्मा गर्न क्रेडिट वा डेबिट प्लास्टिक कार्ड प्रयोग गर्न अनुमति दिदैन। यसले स्थानीय खेलाडीहरूलाई सीमित पार्छ यदि तिनीहरू विदेशी क्यासिनोहरूमा पनि पुग्दछन्, किनकि हामी सबैलाई थाहा छ, प्लास्टिक कार्ड जम्मा गर्ने सब भन्दा सजिलो र पहुँचयोग्य मार्गहरू मध्ये एक हो।
अर्को कानून दाबी गर्छ कि कार्ड खेलहरू, वा सामान्यतया जुवा सहित निजी पार्टीहरू कानूनी छन्। यद्यपि तिनीहरू व्यापारको रूपमा संगठित हुनु हुँदैन; सबै इजाजतपत्र बिना अपरेटरहरु, दुबै कम्पनीहरु वा व्यक्तिहरु लाई दण्ड दिइन्छ र सामान्यतया जरिवाना गरिन्छ। यसबाहेक, सबै नागरिकहरू गैरकानुनी रूपमा अनलाइन खेलिरहेका पक्राउ, जरिवानाको सामना गर्नु र तीन महिना देखि एक वर्ष जेल।
नर्वेमा नियामक अधिकारीहरू
त्यहाँ एक मुख्य अधिकार छ जुन नर्वेमा नर्वे गेमि and र जुवामा सबै मुद्दाहरू र केसहरू प्रशोधन गर्दछ, र यसलाई आश्चर्यको कुरो, जुन खेल प्राधिकरण भनिन्छ। यस गेमिंग प्राधिकरण, यसको पालो मा, संस्कृति र चर्च मामिला मन्त्रालय को रिपोर्ट।
यस एजेन्सीका जिम्मेवारीका तीन मुख्य पक्षहरू छन्:
यो सुनिश्चित गर्दछ कि सबै खेलहरू र शर्त को सबै योजनाहरु को कोनाको मा राज्य को आवश्यकताहरु को पूरा, र एक उचित सार्वजनिक नियन्त्रण को अधीनमा छन्। यो कारण हो किन राज्यको नियन्त्रित एजेन्सीमा खेलको गुच्छा मात्रै अनुमति दिइएन।
यसले जुवाको नकारात्मक नतिजाको साथ काम गर्दछ र आर्थिक घाटा वा लत जस्ता भावनात्मक समस्याहरूलाई रोक्न प्रयास गर्दछ। यो एक सुन्दर पक्ष हो, किनकि सम्भावित नकारात्मक परिणामहरू गम्भीर रूपमा लिनुपर्दछ। यद्यपि तथ्य यो हो कि क्यासिनोमा परेका प्रायः व्यक्तिहरू खेल्न विदेश जान्छन्, वा टाढाबाट तिनीहरूको घरबाट खेल्छन्। त्यसोभए, त्यसमा नकारात्मक नतिजासँग डिल गर्न गाह्रो छ, वा कुनै उचित तथ्या .्कगत डेटा पनि जम्मा गर्नुहोस्।
एजेन्सीले यो पनि सुनिश्चित गर्नुपर्दछ कि सट्टेबाजीको परिणाम स्वरूप प्राप्त सबै नाफा राज्यको स्वामित्वमा छ र अन्ततः समाजको लागि लाभदायक चीजहरूमा खर्च गरिन्छ। यो अर्को मुख्य कारण यो हो कि राज्यले आला को विनियमित गर्न यत्तिको प्रयास गर्दछ; तिनीहरू दानका लागि यी पैसा राख्न चाहन्छन्।
संस्कृति र चर्च मामिला मन्त्रालयले नर्वेमा जुवा खेल्ने विषयमा अन्तिम नियन्त्रण प्रदान गर्दछ। यो कारण हो कि संगठनहरू जुन तिनीहरूको दिमागमा चल्ती छ वास्तवमा घटनाहरू आयोजनाहरूको लागि अनुमति लिने अनुमति दिन्छ र पोकर टूर्नामेन्टहरू पनि। उदाहरणको लागि, २०१ 2015 मा, नर्वेलीय ल्यूकेमिया एसोसिएशनले हेल पोकर घटनाहरूको लागि अनुमति प्राप्त गर्‍यो (शताब्दियौंदेखि नर्वेमा पोकर प्रतिबन्ध लगाइएको छ)।
त्यसोभए राज्यमा कानूनको वरपरका तरिकाहरू छन्, र ठूला व्यवसाय वा परोपकारी संस्थाहरूले यी तरिकाहरू फेला पार्दछन्। अर्कोतर्फ, केवल औसत प्रयोगकर्ताहरू आफैंमा खोलेका अवसरहरू खोज्नुपर्दछ।
नर्वेबाट खेलाडीहरूको लागि लोकप्रिय भुक्तान विधिहरू
जुन २०१० देखि, नर्वेका अनलाइन क्यासिनो खेलाडीहरूले तिनीहरूको NOK क्यासिनो प्लेयर खाताबाट / जम्मा गर्न / निकाल्न क्रेडिट / डेबिट कार्डहरू प्रयोग गर्न सक्दैनन्।
यसले संसाधन खेलाडीहरू NOK अनलाइन क्यासिनोहरूमा अन्य विकल्पहरू जस्तै बोकु, इकोपेज, नेटलर, स्क्रिल, जेटोन, सिरू र एमआईफिनिटी जस्ता वालेटहरू प्रयोग गरेर खेल्न रोक्दैन। इ-वालेटहरू उत्कृष्ट छन् किनकि तिनीहरू सुरक्षित / सुरक्षित, छिटो र विवेकशील छन् र अधिक समय पपिंग गर्दै छन्। उनीहरूमा कम त्रुटिहरू हुन् कि त्यहाँ एक शीर्ष-अप शुल्क लाग्न सक्छ, र तिनीहरूको स्वीकृति क्यासिनो द्वारा भिन्न हुन्छ।
अर्को भुक्तानी विकल्पमा भौचर भुक्तान विधिहरू समावेश गर्दछ, जस्तै Paysafecard। यसका केही फाइदाहरू छन् किनकि यसले तपाईंलाई तपाईंको खर्चमा कडा नियन्त्रण राख्न अनुमति दिँदछ, क्रेडिट जाँचको आवश्यक पर्दैन, सुरक्षित र सुरक्षित छ र अत्यन्त छिटो छ। सीमितताहरू छन्, यद्यपि केही हदसम्म प्रतिबन्धित भौचर आकार, शुल्कहरू, र कोष फिर्ता गर्न प्रयोग गर्न असक्षमता सहित।
शीर्ष १० नर्वे अनलाइन क्यासिनो साइटहरू अपडेट गरिएको: 25 सक्छ, 2020 लेखक: Damon
1 शीर्ष १० नर्वे अनलाइन क्यासिनो साइटहरू एक नयाँ बोनसको साथ!
1.1 शीर्ष १० नर्वे अनलाइन क्यासिनो साइटहरू एक विशाल बोनसको साथ!
2 नर्वे मा जूवा मा वर्तमान स्थिति
3 नर्वेलीयन खेलाडीहरूका लागि कानून
4 नर्वेमा नियामक अधिकारीहरू
4.1 नर्वेलीयन खेलाडीहरूका लागि कानून
शीर्ष १० नर्वे अनलाइन ...